Baarlamanka Somaliland oo dooranaya gudoomiye cusub - BBC News Somali
Baarlamanka Somaliland oo dooranaya gudoomiye cusub
6 Agoosto 2017
Image caption Qaar ka mid ah xubnaha baarlamanka Somaliland
Xildhibaannada golaha Baarlamaanka Somaliland ayaa maanta oo Axad ah u fadhiisanaya sidii ay u dooran lahaayeen gudoomiye cusb ka dib markii uu xilkaa iska casilay gudoomiyihii hore, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), oo mudo laba iyo toban sanadood ah soo hogaaminayey golaha.
Cirro oo ah gudoomiyaha xisbiga Mucaaradka ah iyo musharaxa madaxtinimada ee xisbigaas, ayaa ku sababeeyey is casilaaddiisa in uu doonayo in uu u gacan banaanaado hawlaha ololaha iyo tartanka doorashada dhici doonta bisha Noofember ee sannadkan.
Hadaba kulankan maanta ee lagu dooranayo gudoomiyaha cusub, ayaa rag badani u taartamayaan jagadaa banaanaatay, hase yeeshee tartanka ugu adagi wuxu dhex mari doonaa Baashe Maxamed Faarah oo maanta si rasmi ah iskaga casili doona xilka gudoomiye xigeenka koobaad ee golaha iyo Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Talyanle oo ah xubin ka tirsan baarlamka.
Baashe waxa uu ka mid yahay xisbig talada Somaliland haya ee Kulmiye, halka Cabdiraxmaan Talyanle isna ka tirsanyahay xisbiga mucaaradka ah ee Wadani.
Waxa sidoo kale loo tartami doonaa jagada gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha oo banaanaaanaysa marka Baashe Maxaxmed Faarax oo u tartamaya gudoomiyenimada goluhu iska casilo xilkiisaas ee uu tartanka saaka ka qayb galo.
Jagadaa ku xigeenka koobaad waxa iyaguna ku tartamaya ilaa shan xildhibaan oo ka tirsan baarlamanka, waxaana ay doorashadaasi dhici doontaa todobaad ka dib marka lagu kala food qaado tan gudoomiyaha ee maanta goluhu u fadhiisanayo.
Cidii ku guulaysata xilka gudoomiyenimada baarlamanka Somaliland ee loolanka adag loogu jiro iyo wixii warar ah ee dheeraad ah waxaad kaga bogan doontaan idaacaddayada duhurnimo iyo kuwa ka dambeeya, sidoo kalena waxaad ka daalacan doontaan boggayagan.